एमाले कञ्चनपुरका अध्यक्ष तारालामा तामाङ्गलाई कार्बाही ! माओवादी नेता थापालाई अध्यक्षको जिम्मेबारी
गृहपृष्ठ जिवनशैली एमाले कञ्चनपुरका अध्यक्ष तारालामा तामाङ्गलाई कार्बाही ! माओवादी नेता थापालाई अध्यक्षको जिम्मेबारी
नेकपा एमाले कञ्चनपुरको अध्यक्षमा पुर्व माओवादी नेता बीर बहादुर थापा(पातल)लाई जिम्मेबारी दिएको छ । एमाले केन्दीय तथा प्रादेशिक कमिटिले जिल्ला अध्यक्षमा थापालाई जिम्मेबारी दिएको एक पत्र सार्वजनिक भएको छ ।
१६ चैत्र ०७७ मा नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिले जारी गरेको परिपत्र अनुरुप कञ्चनपुर अध्यक्षमा थापा र सचिवमा सुरेन्द्र विष्टलाई जिम्मेबारी दिएको छ । माओवादी र एमाले एकिकरण भएर नेकपा बनेका बेला नेकपा कञ्चनपुरको अध्यक्षमा माओवादी कोटबाट थापा र सचिवमा तामाङ्ग थिए । नेकपा फुट हुँदा थापा ओली समुह र तामाङ्ग नेपाल समुहमा थिए ।
२३ फागुन सर्वोच्च आदालतको निर्णयसंगै दुवैपार्टी पूर्ववत अवस्थामा ब्यूँतिए माओवादी नेता फर्किएनन । उनीलाई नेकपा ओली समुहले अध्यक्ष बनायो । पुर्ववत अवस्था एमाले कञ्चनपुरको अध्यक्षमा तामाङ्ग नै थिए । पार्टी ब्यूर्तिएसंगै उनी अध्यक्षकै जिम्मेबारी हुनुपर्ने भएपनि ओली समुहले उनलाई कार्बाही गरेर अध्यक्षमा थापालाई जिम्मेबारी दिएको छ । ओली समुहका नेताहरुका अनुसार तारालमा तामाङ्गले पार्टीको हित विपरित काम गरेको भन्दै जिम्मेबारीबाट हटाईएको बताएका छन । नेपाल समुहका नेताहरुले ओलीको हैकमवादी र ससद विघटनका बेला आफुतर्फ नलागेको भन्दै माओवादी नेतालाई ल्याएर अध्यक्ष बनाएको भन्दै आक्र्रोस पोख्दै आएका छन । एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल समुहका नेताहरुलाई धमाधम कार्बाही गर्दा पनि उनीहरु त्यतै एमालेतिर टाँस्सीएर किन बस्नु परेको भन्दै प्रशन गरिरहेका छन ।
मानव अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजकमा साउद
मानव अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजकमा नागरिक समाज कञ्चनपुरका अगुवा नर बहादुर साउद चयन भएका छन । बिहीबार महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको मानव अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालको भेलाबाट साउद नागरिक समाज प्रदेशको संयोजकमा चयन भएका हुन । उनी हाल संयोजक भएपनि पछि समिति विस्तार हुनेछ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा उक्त समितिले काम गर्ने बुझिन्छ ।
भीमदत्त नगरपालिका १२ मा केश श्रृङगार तालिम शुरु
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १२ नम्बर वडामा केशश्रृङगार तालिम शुरु भएकोछ । व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र कञ्चनपुरको आयोजनामा केशश्रृङगार तालिम शुरु भएको हो ।
व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रका प्रमुख तर्कराज विष्टको प्रमुख आथित्यमा तालिम शुरु भएको हो । तालिम उद्घाटन गर्दै केन्द्र प्रमुख विष्टले तालिममा सिकेका विषयबस्तु व्यवहारिक जिवनमा कार्यान्वयनमा जोडदिए । भीमदत्त नगरपालिका १२ का वडाध्यक्ष कृष्णसिह देउपाले
Bimal Dhami - २०७७ चैत्र २० 0
बेलडाँडी, नेकपा एमाले कञ्चनपुरको अध्यक्षमा पुर्व माओवादी नेता बीर बहादुर थापा(पातल)लाई जिम्मेबारी दिएको छ । एमाले केन्दीय तथा प्रादेशिक कमिटिले जिल्ला अध्यक्षमा थापालाई जिम्मेबारी दिएको...
महाकाली अस्पतालको चमेना गृह ठेक्का बदर कर्मचारीकै परिवारलाई ठेक्का दिलाएर अनुचित लाभ लिन खोज्ने मेसु श्रेष्ठको सपना चकनाचुर
कञ्चनपुर, महाकाली अस्पतालको चमेना गृह ठेक्कामा चलखेल मात्र नभई कमिसनको बार्किनिङ्ग भएपछि चमेना गृहको ठेक्का नै बदर गरिएको छ । अस्पतालमै कार्यरत कर्मचारीको परिवारलाई चमेनागृह संचालनका...